အတူတူနွှဲပျော်၊ MRCCI 2019 မြန်မာ့အတာ...
Written on 05/04/2019, 14:30
MRCCI ကို ချစ်သော မန်းမြို့သူ၊ မြို့သားများခင်ဗျား, ၂၀၁၉ ခုနှစ် မြန်မာ့ရိုးရာ မဟာအတာသင်္ကြန်ပွဲတော် - မန္တလေးလမ်းလျှောက်သင်္ကြန်ကို...
Written on 01/04/2019, 16:47
ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နံနက် ၉:၃၀ အချိန်တွင် Mercure Mandalay Hill Resort ၌ မလေးရှားသံအမတ် H.E Mr Zahairi Bin Baharim နှင့် Nordin ပထမအတွင်းဝန်...
Mandalay Int'l Trade fair and business forum 2019 အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် အဖက်ဖက်မှ...
Written on 01/04/2019, 15:44
~အထူးကျေးဇူးတင်လွှာ~ “Mandalay Int’l Trade Fair & Business Forum 2019” – “မန္တလေးနိုင်ငံတကာ ကုန်စည်ပြပွဲနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ ၂၀၁၉”...
“MRCCI နှင့် IHK-Reutlingen တို့အကြား (၂၀၁၈-၂၀၂၁) သက်တမ်းအတွက် Implementation Agreement...
Written on 29/03/2019, 15:12
“MRCCI နှင့် IHK-Reutlingen တို့အကြား (၂၀၁၈-၂၀၂၁) သက်တမ်းအတွက် Implementation Agreement လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း” မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး...